10 Ezigbo Mmasị You Amaghị Banyere Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Ezigbo Mmasị 10 Amaghị Banyere Ecommerce
Encarni Arcoya | | Ọzụzụ ECommerce
Ecommerce bụ azụmahịa kachasị ewu ewu ma na-achọ oge a. Onye ọ bụla maara banyere azụmahịa e-commerce na uru ya.
Na mgbakwunye, enwere ọnụọgụ nke nyiwe maka imewe weebụsaịtị wepụta dị ka Magneto, Joomla, Drupal, wdg.
1 Ndị a bụ eziokwu dị mma iri na ụma ị nwere ike ịmaghị banyere azụmahịa e-commerce
1.1 Ezigbo mmasị gbasara Ecommerce
2 Data na azụmahịa kọmputa na Spain
2.1 Purchazụta ihe n'ịntanetị nke dị kemgbe ogologo oge
2.2 Usoro ịkwụ ụgwọ ahọrọ na Spain
2.3 Ọganihu 'na ụbọchị ezumike'
2.4 Omenala e-commerce na-agbanwe agbanwe
Ndị a bụ eziokwu dị mma iri na ụma ị nwere ike ịmaghị banyere azụmahịa e-commerce
Ezigbo mmasị gbasara Ecommerce
Ihe karịrị 67% nke ndị mmadụ na-ahụ n'anya ịzụta site na ekwentị ha karịa laptọọpụ ha, yana sistemụ ndị ọzọ: onye ọ bụla maara etu esi arụ ekwentị mkpanaaka ma jiri ọtụtụ ngwa.
Ná mmalite nke afọ 2015, ịzụrụ ama na-aza 60% nke ire ahịa niile.
Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ịzụ ahịa n'ịntanetị n'ụwa si Eshia na akụkụ na South Korea.
Uwe na ngwa ahịa bụ ngwa na-eto ngwa ngwa na azụmahịa e-commerce.
33% nke azụmahịa mkpanaka niile emere n'ụwa niile sitere na United States.
68% ndị Canada na ndị Britain zụtara ngwaahịa ahụ n'ịntanetị na mpụga obodo ha si.
N'afọ a (2017), azụmahịa mkpanaka ga-anọchite anya 24% nke ahịa e-commerce zuru ụwa ọnụ.
95% nke ndị ọrụ Twitter gara na ebe nrụọrụ weebụ mkpọsa ma e jiri ya tụnyere ndị ọrụ ịntanetị ndị ọzọ - nke a pụtara na azụmaahịa e-azụmahịa niile na-etinye uche ma na-ewepụtakwu ndị na-eso ụzọ na Twitter karịa ndị ọzọ.
Ecommerce bụ azụmaahịa na - eto ngwa ngwa - onye ọ bụla maara ya, n'ihi na ọ na - enyere ndị ahịa aka ịchekwa oge na mbọ ha.
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ karịa ngwaahịa ahụ n'ịntanetị kama ịga ahịa ma hụ ngwaahịa ahụ n'ụzọ anụ ahụ.
Data na azụmahịa kọmputa na Spain
Na mba ọ bụla, azụmahịa kọmputa na-akpa àgwà dị iche iche. Enwere ụfọdụ mba nke mmalite nke a buru ibu, ma di n'ihu nke ndi ozo; na n'ụzọ dị iche, mba ebe ha na-erubeghị na ọkwa nke ndị kachasị. Iji nye gị echiche, amaara na ọnọdụ ndị na-eme na United States, na Spain anaghị abịarute ruo mgbe afọ ole na ole gachara, nke na-enye ọtụtụ ohere ịmụrụ anya iji chọta ụdịrị omume ndị na-ewu ewu ma were uru nke na ha ga-abụ ndị mbụ.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmara ụfọdụ data gbasara azụmahịa kọmputa na Spain iji mara mgbanwe ndị nwere ike ibilite.
Ugbu a, Spain bụ ọnọdụ mbụ nke azụmahịa kọmputa na Europe. Ọ bụghị onye ọjọọ, ọkachasị tụmadị na afọ ndị na - adịbeghị anya azụmahịa kọmputa arịwanye elu. Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịzụ ahịa n'ịntanetị kama ịga ụlọ ahịa ịchọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na e nwere ọtụtụ dịgasị iche iche na Internetntanetị, onyinye ahụ sara mbara nke ukwuu, na-enwe ike ịchọta ihe niile (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile) site na azụmahịa kọmputa.
Purchazụta ihe n'ịntanetị nke dị kemgbe ogologo oge
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị malitere ma na-achọpụta taa ihe azụmahịa kọmputa bụ, ezi na ihe ọjọọ nke ịzụrụ n'ịntanetị, na ohere ọ na-enye gị, eziokwu bụ na, dị ka data a tụlere, ugbua 64% nke Ndị Spain na-azụ ihe n'ịntanetị kemgbe tupu 2012, ọnụ ọgụgụ na-enwe obi abụọ na-arịwanye elu nke nta nke nta. Rụba nke ahụ ama ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma maara nke ọma na teknụzụ ọhụrụ, nke pụtara na maka ha ụlọ ahịa dị n'ịntanetị abụghị ihe ọhụrụ, mana uzo iji nweta ihe ha choro n’enweghi ahapu ulo.
N'ezie, ntakịrị ihe karịrị ọkara nke 100% jụọ ajụjụ tupu ị nwee mkparịta ụka, blọọgụ, wdg. na-achọ ndị ahịa ahụ nwere ngwaahịa ndị ahụ ka ha mara ma ha dị mma ma ọ bụ na ọ ka mma ịgafe ha. Otu ihe ahụ na-aga maka aha njirimara n'ịntanetị. Mgbe ụlọ ahịa anaghị ama nke ọma, ọtụtụ mmadụ na-achọ ịntanetị maka echiche ya, ọkachasị mgbe ọnụ ahịa ya na-adị oke ọnụ karịa iyi eziokwu.
Eziokwu ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ ụdị ngwaahịa na ọrụ a na-azụ n'ịntanetị. Ruo afọ ole na ole gara aga, njem, tiketi, na nkwukọrịta okwu kachasị elu; agbanyeghị, ugbu a ihe eji atụrụ ndụ na ihe eji atụrụ ndụ, teknụzụ na ọbụlagodi akwa na-abawanye.
Usoro ịkwụ ụgwọ ahọrọ na Spain
Banyere usoro ịkwụ ụgwọ, ọ bụ ezie na na 2014 ihe zuru ebe nile bụ iji PayPal, ugbu a ihe agbanweela. Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ kaadị akwụmụgwọ. Gịnị mere e ji gbanwee ya? Ọ bụ ihe kwere nghọta. Na mbu, ahuru e-commerce dika uzo isi “ojoro” ufodu. Ọtụtụ atụkwasịghị obi na ịnye data nkeonwe, obere ụlọ akụ, yana iji PayPal, ebe naanị ị ga-enye email ahụ, ma ị nwekwara ụlọ ọrụ na, ọ bụrụ na ịnata ngwaahịa ahụ ọnwa abụọ, ọ dara ogbenye ogo ma ọ bụ na emeghị ka ị kwenye, ị nwetara nkwụghachi gị na-enweghị nsogbu gbasara ihe ọ bụla.
Ugbu a, ọ bụghị na anyị nwere ike ikwu na iji kaadị akụ ka nchekwa, n'ihi na anyị nwere ike ịzụta ma ghara ịnweta ngwaahịa ndị ahụ, mana ndị ọrụ na-ejiwanye ya maka ịzụta ha. Na mgbakwunye, a ghaghị iburu n'uche na nke ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ e-enyeghị ego dịgasị iche iche. Nke a bụ ihe kpatara na ịzụrụ site na saịtị ndị a na-amaghị, ndị mmadụ na-achọkarị echiche ha ma ọ bụrụ na enweghị ike ịkwụ ụgwọ na ụdị mkpuchi.
Ọganihu 'na ụbọchị ezumike'
Cyber ​​Monday, Black Friday, izu Amazon ... gịnị ka ha na-ada gị? Ha bụ ihe omume, ma nke mba ma nke mba, nke a na-enweta 'onyinye'. Ndị ọrụ na-amatawanye oge ndị ahụ mgbe ha nwere ike inweta nnukwu azụmaahịa.
Mana dị ka mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ 'red' akụkọ ifo na-ekwu, sị: "anyị abụghị ndị nzuzu." Ndị ọrụ maara ihe karịa, na eziokwu ahụ bụ na a na-ere ngwaahịa apụtaghị na ha ga-azụ ya n'ebughi ụzọ lee anya ma ọ bụrụ na ọ bụ onyinye.
Olee otú ha si eme ya? Site na peeji ọnụ ọgụgụ nke na-enye ntopute nke ọnụ ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, onye ọrụ ahụ nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ihe ọ chọrọ n'ụbọchị ndị ahụ bụ ire ere ma ọ bụ na ọnụahịa abawanyela ụbọchị ma ọ bụ izu tupu etinye ya na nke ọ bụ tupu ihe omume ahụ.
Nke a na-eme ka ahụ ghara iru ala. Ọ bụghị otu ihe ahụ ka ị gara ire ere ịmaghị nke ọma ma ha mebie ya ma ọ bụ ihe ha mere bụ wolite ọnụ ahịa ahụ. Mana ugbu a, "ọnyà" nke ndị na - ere ahịa nwere ike ijide, nke na - emetụta aha nke ụdị ahụ.
Omenala e-commerce na-agbanwe agbanwe
Ọ naghị agbanwe naanị. Aghọ. Ọ na-aghọwanye ihe a na-ahụkarị iji ekwentị mkpanaaka kama ichere ịnọ na kọmputa ịzụta ihe n'ịntanetị. Ekwentị mkpanaka abụrụla mmụba nke mmadụ. Na ịzụ ahịa, dị mfe, na «naanị otu pịa», bụ Ha na-anwa ọnwụnwa ma na-arụ ọrụ maka ndị na-ere ahịa n'ihi na ha ruru ebe "mkpali" ahụ dị.
Iji maa atụ, were ya na ị na-aga n’okporo ụzọ na ị hụrụ onye nwere ekweisi. Liked nwere mmasị na ha, ị na-achọ ha wee hụ ụlọ ahịa. Nke ahụ "dị mkpa" ịnwe ha, ọbụlagodi mgbe ịchọghị ha, na-eme zụọ ozugbo, na-enweghị echere ịla n'ụlọ, ma ọ bụ nwee kọmpụta ịme ya. Naanị ndị na-ele oke anya na ọnụahịa ka a na-ejide n'aka (ma ha na-"emehie" ọtụtụ mgbe.
Ebe ọ bụ na e mere ya ere mbu na ntaneti, nke site na uzo bu ihe omuma Sting (ọkachasị, Akụkọ iri nke Summoner), pizza sokwa na PizzaHut, ọtụtụ afọ agafeela. Ntughari nke ndi okachamara chere bu e-commerce na-agagharị na ekwentị. Netwọk mmekọrịta, eCommerces nke abụọ, wdg. ha bukwa ihe gbasoro ma buru n’uche. Nke mbu n'ihi na ha na - eweta "ulo ahia" a na nso nso otutu ndi oru; nke abụọ abụrụ n'ihi na n'oge nsogbu, ọtụtụ na-achọ ire ma ọ bụ pawn.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ezigbo Mmasị 10 Amaghị Banyere Ecommerce
eme Ọnwa 11
Na oria ojoo a agbanweela otu anyi si eri ihe bu ihe a na-aghaghi ikwusi, ya mere, anyi aghaghi ima otu esi agbanwe, karie nke ahia. Havekwesịrị ilekọta nkọwa niile, site na ntanetị gaa na nkwakọ ngwaahịa maka eCommerce.
Ndị egwuregwu dị ọcha
Strategy na TikTok site na 0 ruo 100 maka Ecommerce